कसरी बुझेका छन् नेपालीले एमसीसी र उपाध्यक्ष फतिमालाई ? Jana Aastha News Online
कसरी बुझेका छन् नेपालीले एमसीसी र उपाध्यक्ष फतिमालाई ?
प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०७८, सोमबार १४:००
अमेरिकी सहयोग परियोजनाअन्तर्गतको एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेर कचल्टिएपछि उपाध्यक्ष फतिमा सुमार गत साता काठमाडौं आएर हिजो राति स्वदेश फर्केकी छन् । प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग पनि चार दिनसम्म भेटघाट गरिन् ।
कतिपयलाई नेताको निवास र कतिपयलाई आफू बसेकै होटलमा भेटेर अमेरिकी सरकारको चाहना प्रष्टसँग राखिन् । हिजो दोहा हुँदै अमेरिका उड्नुअघि काठमाडौंमा अमेरिकी दूतावासको संयोजनमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना पनि गरेकी थिइन् ।
पत्रकार सम्मेलनकी मुख्य आकर्षण उपाध्यक्ष सुमार थिइन् । उनले राजनीतिक नेतृत्वसँग भएको भेटघाटको बारेमा राखिएका धारणा भन्दै केही कुरा प्रष्ट पार्ने कोशिश गरिन् । त्यहि विषयवस्तुलाई समेटेर काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले आज सामाजिक सञ्जालमा केही तस्बिर र विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
‘उनको सुन्दर हाँसोबारे केही भन्नु छैन । एमसीसीको कुनै मतलब नगरौं,बरु उनको सुन्दर हाँसो हेरौं ।’
झण्डै दुई घण्टाको बीचमा उक्त फोटोसहितको सन्देशमा झण्डै ९ सय जनाले आफ्नो धारणा राखेका छन् भने २५ सयभन्दा बढीले लाइक गरेका छन् । अमेरिकी दूतावासको फेसबुक पेजमा उल्लेखित सुमारको पत्रकार सम्मेलन र एमसीसीबारेको सामाग्रीमा धेरैजसोले सो सम्झौताको बिरोध गरेको पाइन्छ ।
छुङ्कु उक्याबले लेखेका छन्, ‘हाम्रा नेताहरु पक्षमा देखिए पनि बहुमत जनता एमसीसीको पक्षमा कहिल्यै छैनन् ।’ त्यसैगरी निरञ्जन क्षेत्रीले नो एमसीसी भन्दै लेखेका छन्, ‘हामी सबैलाई थाहा छ,यो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अभिन्न अंग हो ।’
मैनाली रमेशको प्रतिक्रिया छ, ‘किन यो सम्झौता मात्र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने ?’ त्यसैगरी तेन्जिङ बुद्ध मगरले अस्थिर देशमा अनुदानले फाइदा हुने भनेको केही व्यक्तिलाई मात्रै हो भन्दै अगाडि लेखेका छन्, ‘हाम्रो जस्तो अस्थिर देशको फाइदा उठाई एमसीसी जस्ता असमान सम्झौता जबरजस्ती लागु कदापि नगरुन् ।’
बालकृष्ण रिमालको प्रतिक्रिया छ, ‘हैन कस्तो अनुदान हो यो दिनेले दिनैपर्ने लिनेले लिनैपर्ने, यत्रो विवाद भएपछि फिर्ता गरे भैगो नि भन्या !’ सबैभन्दा रमाइलो कमेण्ट भुपेन्द्र कसजुले गरेका छन् । फतिमाको हँसिलो अनुहारलाई लक्षित गर्दै उनले भनेका छन्,‘उनको सुन्दर हाँसोबारे केही भन्नु छैन । एमसीसीको कुनै मतलब नगरौं,बरु उनको सुन्दर हाँसो हेरौं ।’